Gbalịa gam akporo 6.0 na LG G3 ugbu a | Gam akporosis
Nwalee ama gam akporo 6.0 na mba LG G3, D855 ekele ndị otu Xenon HD.
You na-achọ ịnwale uru nke Android 6.0 na LG G3 mba nlereanya? Ọ bụrụ na azịza nye ajụjụ a bụ SI, are na-nri ebe ebe anyị na-aga na-egosi gị nzọụkwụ site nzọụkwụ otú melite LG G3 na gam akporo 6.0 Marshmallow ekele maka AOSP Rom, ma ọ bụ ihe bụ otu Andorid Open Source Project nke dị ọcha na gam akporo.
Tupu ịga n’ihu na-agụ post a, m ga-adọ gị aka na ntị na Rom a ka na-ewere dị ka Development Rom ma ọ bụ Ule, nke dị na mmalite oge na Ọ bụghị dị irè n'ihi na ụbọchị iji anyị gam akporo ọnụ dị ka ọ pụrụ inye anyị nsogbu na-atụghị anya ya. Ọ bụrụ na ị ka dị njikere ịhụ ihe gam akporo 6.0 Marshmallow na-enye anyị na arụmọrụ agbakwunyere ọhụrụ, na-eso nkuzi a ma mezuo ihe niile anyị chọrọ ka anyị gwa gị ebe a yana nlezianya niile, ị gaghị enwe nsogbu ịnwale gam akporo 6.0 na LG gị G3 mba nlereanya na mgbe ahụ ngwa ngwa laghachi gị aga Rom version na gị niile ngwa emebibeghị na dị ka i nwere tupu mgbukepụ nke a Rom.
1 Ihe ndị dị mkpa iji nwalee gam akporo 6.0 na LG G3 mba nlereanya D855
2 Faịlụ dị mkpa iji nwalee gam akporo 6.0 na LG G3 nlereanya D855 International.
3 Usoro ntinye 6.0 gam akporo na LG G3 D855
Ihe ndị dị mkpa iji nwalee gam akporo 6.0 na LG G3 mba nlereanya D855
Ihe niile m chọrọ ịhapụ ebe a jikọtara na nkuzi ha bara uru ebe m gosipụtara gị nzọụkwụ site na otu esi enweta ihe achọrọ iji nwee ike ịgbaso nkuzi nkuzi ndị ọzọ a. anyị ga-emelite LG G3 D855 na gam akporo 6.0 Marshmallow:
Nwee LG G3 mba nlereanya nke ahụ bụ na mbụ gbanye mgbọrọgwụ ma nwee TWRP Iweghachite.
Melite TWRP na nsụgharị ya kachasị ọhụrụ.
Ozugbo anyi nwere onu ogugu mgbọrọgwụ anyị ga-etinye TWRP Iweghachite na naanị wụnye ma na-agba AutoRec site na Playlọ Ahịa Google
Site Iweghachite TWRP, anyị ga-eme nadroid ndabere nke usoro anyị niile ugbu a, ịlaghachi na ya n'ụzọ dị mfe mgbe anyị mechara nyocha ahụ na gam akporo 6.0 Marshmallow ma nwee ihe niile dị ka anyị nwere tupu ịgha ụgha Rom Xenon HD.
Tupu na-egbu maramara na Rom Xenon HD, tinye ntọala gam akporo na nwee USB debugging.
Nwere 100 x 100 batrị ebubo nke ike ya.
Faịlụ dị mkpa iji nwalee gam akporo 6.0 na LG G3 nlereanya D855 International.
Iji wụnye na nwalee gam akporo 6.0 na LG G3 mba nlereanya D855, anyị ga-achọ naanị faịlụ abụọ abịakọrọ na usoro ZIP na anyị ga-e copyomi na-enweghị decompressing na esịtidem ebe nchekwa nke LG G3. Faịlụ ndị dị mkpa bụ Rom n'onwe ya na ngwa Google nke ị nwere ike ibudata na njikọ ndị a:
Rom gam akporo 6.0 maka LG G3 nlereanya D855 Xenon HD
Ngwa Google maka gam akporo 6.0 Marshmallow.
Usoro ntinye 6.0 gam akporo na LG G3 D855
Ozugbo ezutere ihe ndị achọrọ na Zips abụọ ebudatara ma depụtaghachi na ebe nchekwa nke LG G3, Anyị ga-amalitegharịa na Ọnọdụ Iweghachite wee soro usoro ndị a na leta na-enweghị ịhapụ ọ bụla n'ime ha:
Anyị tinye nhọrọ Hichapụ, anyị họrọ Nhicha di elu na anyị akara cache, data, usoro y dalvik cache
Anyị na-aga nhọrọ wụnye na anyị na-ahọrọ mbụ Zip nke Xenon HD Android 6.0 Rom na mgbe ahụ Zip nke Gapps Android 6.0 Marshmallow.
Reboot usoro ugbu a na ọtụtụ ndị ọrịaebe mmalite nke mmalite nke ọnụ nwere ike iburu anyị ruo nkeji iri ma ọ bụ karịa obere oge.
Na nke a ị nwere ike ịnwale A gam akporo 6.o na LG G3 ma gwa anyị ihe ị chere na chinchi ị hụrụ na Rom yana ihe ị masịrị gị gbasara ụdị gam akporo ọhụrụ a. Mgbe ahụ, ịhapụ ihe niile dị ka ọ dị tupu Rom enwu gbaa, anyị na-alaghachi n'ime TWRP Iweghachite na site na nhọrọ Ndabere na weghachite, anyị na-ahọrọ weghachi ma anyị na-ahọrọ ndabere nandorid mere na mbụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » LG » Nwalee ama gam akporo 6.0 na mba LG G3, D855 ekele ndị otu Xenon HD.
Michael F. dijo
Dị nnọọ ngwa ngwa V6 mana ezigbo akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na ụfọdụ chinchi dị ka FC na Nchọgharị na-agaghị ekwe ka ị na ihe, ọ dịghị version of gapps na-arụ ọrụ m na ihe ndị ọzọ
Zaghachi Michael F
Enweghị m mmasị na ya, enwere m ya ma ọ na-eri ọtụtụ batrị ma ugbu a enweghị m ike ịlaghachi na nke gara aga n'ihi na anaghị m akwado ihe ọ bụla
Ndewo, otu ihe ahụ na-eme m, enweghị m ike ịlaghachi na kitkat ma ọ bụ ihe ọ bụla… .. Achọrọ m azịza mana enweghị m ike ịchọta ozi ọ bụla, ọ bụrụ na ịmara ihe ị nwere ike zitere m email biko…. gmo.olivares.ga@gmail.com
ekele m ekele m
BeatNiks, mepụta ma kuzie anụ ụlọ nke gị nke na-eto dị ka egwu ị na-ege site na Spotify
OnePlus: ihe niile ịchọrọ ịma banyere ọdịnihu nke ụlọ ọrụ ahụ